ဆောင်းပါး > တရားဒေသနာ > ခရစ်ယာန်ကောင်းတစ် ဦး ဆိုတာဘာလဲ
ဝက်သားစားဖို့ တွန့်ဆုတ်နေခဲ့တာ နှစ်အတော်ကြာပြီ။ စူပါမားကတ်တစ်ခုမှာ "ဝက်သားချောင်း" ကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က "ဒီဝက်သားချောင်းထဲမှာ ဝက်သားရှိတယ်!" မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ သေးငယ်သောပုံနှိပ်တွင်မူ အဖြူအမည်းဖြစ်သည်။ “Der Kassensturz” (ဆွဇ်တီဗီရှိုးတစ်ခု) သည် ဝက်သားချောင်းများကို စမ်းသပ်ပြီး ဝက်အူချောင်းများကို အသားကင်များတွင် အလွန်ရေပန်းစားကြောင်း ရေးသားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ဝက်အူချောင်းနဲ့တူတဲ့ ဝက်အူချောင်းတိုင်းကတော့ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဝက်သားထက် ဝက်သား ပိုများတတ်သည်။ အရသာမှာလည်း ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူ ဂျူရီလူကြီးသည် “Kassensturz” အတွက် အရောင်းရဆုံး ဝက်အူချောင်းများကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံး ဝက်အူချောင်းတွင် ဝက်သားသား 57% သာပါဝင်ပြီး အထူးအရသာရှိသည်ဟု အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် "ခရစ်ယာန်ဘာသာ" တံဆိပ်ကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုပြီး မိမိကိုယ်ကို ဤသို့မေးပါ- "ခရစ်တော်သည် ယင်းပေါ်တွင် ခရစ်တော်တည်ရှိရာအရပ်၌ ရှိပါသလား။
ခရစ်ယာန်ကောင်းတစ်ယောက်ယောက်ကိုသင်သိပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်ခရစ်ယာန်ကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုအပြည့်အဝမပြောနိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုသာကျွန်ုပ်သိသည်။ ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်! အခြားသူများမှာမူခရစ်တော်၌သူတို့နေထိုင်ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းအတာအထိခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြသည်။ မင်းဘယ်လိုခရစ်ယာန်မျိုးလဲ။ ၁၀၀% ခရစ်ယာန်လား သို့မဟုတ်သင်အများစုသည်သင်ကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြစ်သဖြင့်“ ကျွန်ုပ်သည်ခရစ်ယာန်တစ် ဦး ဖြစ်သည်” ဟူသောတံဆိပ်ကပ်ထားသည့်တံဆိပ်ကပ်ထားသူသာဖြစ်သည်။ သင်လိမ်လည်မှုဖြစ်နိုင်ခြေလား။
ဒီအကျပ်ရိုက်မှုထဲကထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိတယ်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်နောင်တရခြင်း၊ နောင်တတရားအားဖြင့်သခင်ယေရှုကိုနောင်တရခြင်းအားဖြင့် ၁၀၀% ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာမည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပါ။
ပထမအချက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ နောင်တတရား” ကိုစဉ်းစားသည်။
သခင်ယေရှုက သူ၏သိုးခြံထဲသို့ မှန်ကန်သောလမ်းသည် တံခါးပေါက်မှ ဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ယေရှုက၊ ငါသည် ဤတံခါးဖြစ်၏။ တချို့က ဘုရားနိုင်ငံတော်ထဲဝင်ဖို့ တံတိုင်းကျော်တက်ချင်ကြတယ်။ ဒါလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ လူသားများအတွက် ဘုရားသခင် ပေးထားသည့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ သွားရာလမ်း ပါဝင်သည်။ နောင်တနှင့်ယုံကြည်ခြင်း သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်၎င်း၊ ဒါတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပဲ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့တက်ရန်အခြားနည်းဖြင့်ကြိုးစားသူကိုဘုရားသခင်လက်မခံနိုင်ပါ။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံတရားကိုဟောပြောခဲ့သည်။ ၎င်းသည်Jesusသရေလလူတို့အားယေရှုအားသူတို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံရန်အတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကသင်နဲ့ကျွန်မအတွက်ဒီနေ့ပဲ။
“ယောဟန်အဖမ်းခံရပြီးနောက်၊ ယေရှုသည် ဂါလိလဲပြည်သို့လာ၍ ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောလျက်၊ အချိန်စေ့ပြီ၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် နီးပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ နောင်တရပြီး ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ပါ” (မာကု 1,14စာ-၁၅)!
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်အလွန်ရှင်းလင်း၏။ နောင်တနှင့်ယုံကြည်ခြင်းသည်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ငါနောင်တမရခဲ့ရင်ငါ့ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုလုံးတည်ငြိမ်နေတယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်လမ်းအသွားအလာ၏နိယာမကိုငါသိ၏။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကမီလန်ကိုကားနဲ့မောင်းခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းမြန်လွန်းတဲ့အတွက်မြို့မှာတစ်နာရီ ၂၈ ကီလိုမီတာမြန်တယ်။ ငါကံကောင်းခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုမရုပ်သိမ်းပါဘူး ရဲတွေကကျွန်တော့်ကိုဒဏ်ငွေအများကြီးပေးပြီးတရားစီရင်ရေးသတိပေးချက်ပေးခဲ့တယ်။ အလုပ်များသောကားမောင်းခြင်းသည်ငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ခြင်းနှင့်အမိန့်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
အာဒံနှင့်Eveဝမှတစ်ဆင့်အပြစ်တရားသည်ဤလောကသို့ဝင်သော အချိန်မှစ၍ လူတို့သည်အပြစ်၏ထမ်းပိုးအောက်ရောက်နေသည်။ အပြစ်၏အခကားထာဝရသေခြင်းပေတည်း။ လူတိုင်းကဒီဘ ၀ ကိုအဆုံးသတ်ပေးတယ်။ “ နောင်တရခြင်း” ဟူသည်ဘဝတွင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ လူတစ် ဦး ၏တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ဘဝကိုနောင်တယူပြီးဘုရားသခင်ဆီပြန်လှည့်လာဖို့။
နောင်တရခြင်းဆိုသည်မှာ - «ကျွန်ုပ်၏အပြစ်ကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုပြီး ၀ န်ခံပါသည်။ “ ကျွန်ုပ်သည်အပြစ်သားဖြစ်ပြီးထာဝရသေခြင်းတရားကိုခံထိုက်ပါသည်။ »ကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောဘဝလမ်းစဉ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုသေခြင်းတရားဖြစ်စေသည်။
“သင်တို့သည်လည်း တစ်ချိန်က ဤလောကပုံစံအတိုင်း နေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ အုပ်စိုးတော်မူသော တန်ခိုးကြီးသောဘုရား၊ ယခုအချိန်တွင် မနာခံမှု၏သားတို့၌ လုပ်ဆောင်တော်မူသော ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော၊ သင်တို့သည် လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်တို့မှ အသေခံခဲ့ကြပြီ။ ၎င်းတို့အနက်မှ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် တစ်ချိန်က ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိပကတိအလိုဆန္ဒများနှင့်အညီ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ဇာတိပကတိနှင့် အာရုံများ၏ဆန္ဒကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကာ အခြားသူများကဲ့သို့ သဘာဝအားဖြင့် အမျက်ဒေါသ၏သားမြေးများဖြစ်ခဲ့ကြသည် (ဧဖက်၊ 2,1-3) ။
ကျွန်ုပ်၏အမှားများနှင့်အပြစ်များကြောင့်ကျွန်ုပ်သေသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်ရေးအရစုံလင်ခြင်းမဖြစ်လာနိုင်ပါ။ လူသေတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော့်မှာဘဝမရှိဘူး၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်၏အကူအညီအပေါ်သေခြင်း၏အခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်လုံးလုံးမှီခိုနေရသည်။ သခင်ယေရှုတပါးတည်းသာသေသောလူတို့အားရှင်ပြန်ထမြောက်စေသည်။
အောက်ပါဇာတ်လမ်းကိုသိလား လာဇရုဖျားနေကြောင်းယေရှုကြားလျှင်ဗေသနိရွာရှိလာဇရုကိုမသွားမီနှစ်ရက်လုံးလုံးစောင့်နေခဲ့သည်။ ယေရှုဘာကိုစောင့်နေခဲ့တာလဲ လာဇရုသည်မိမိကိုယ်ကိုဘာမျှမလုပ်နိုင်သည့်အချိန်အထိဖြစ်သည်။ သူသေဆုံးမည့်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ သင်္ချိုင်းအနားမှာယေရှုရပ်နေစဉ်သူဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာငါမြင်တယ် ကျောက်ကိုရွှေ့ကြလော့ဟုယေရှုသည်မိန့်တော်မူလျှင်၊ ကွယ်လွန်သူ၏အစ်မမာတာက“ သူကနံနေတယ်၊ ​​၄ ရက်လောက်သေပြီ” ဟုပြန်ပြောသည်။
သင်၏အသက်တာတွင်ယေရှုအား“ ကျောက်တုံးကိုလှိမ့်ပစ်လိုက်ခြင်း” အားမဖော်ပြလိုခြင်းကပုပ်ပျက်စေသလား။ နောက်ကျောပုံပြင်။
ကျောက်ကိုလှိမ့်လှန်။ ၊ ယေရှုသည်ဆုတောင်းတော်မူပြီးလျှင်၊ လာဇရု ထွက်၍ လာလော့ဟုကြီးစွာသောအသံနှင့်ဟစ်ခေါ်တော်မူ၏။ ကွယ်လွန်သူထွက်လာ၏။
အချိန်ပြည့်စုံပြီ၊ သခင်ယေရှု၏စကားသံသည်လည်းသင်တို့ဆီသို့လာသည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့၌တည်ထောင်သောအချိန်နီးပြီ။ ယေရှုက“ ထွက်လော့! မေးခွန်းမှာသင်သည်သင်၏တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော၊ အနံ့ဆိုးသောအတွေးအခေါ်နှင့်အပြုအမူပုံစံမှမည်သို့ထွက်လာသနည်း။ သင်ဘာလိုအပ်ပါသလဲ? ကျောက်တုံးကိုလှိမ့်ပစ်ဖို့သင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုလိုအပ်တယ်။ သငျသညျသင်္ချိုင်း shrouds ချွတ်ကူညီရန်သင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ သင်သည်ဟောင်းနွမ်းသောအနံ့ဆိုးသောအတွေးအခေါ်နှင့်အပြုအမူများကိုသင်္ဂြိုဟ်ရန်သင့်အားကူညီရန်တစ်စုံတစ်ယောက်လိုအပ်သည်။
ငါ့ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးအတားအဆီးကငါ့ရဲ့အပြစ်ရှိတဲ့သဘာဝပဲ။ သမ္မာကျမ်းစာက "လူအို" အကြောင်းပြောထားသည်။ ဘုရားသခင်မရှိ၊ ခရစ်တော်မရှိရင်ငါ့အခြေအနေပဲ။ ငါ၏အလိုတော်နှင့်ဆန့်ကျင်သောအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏လူဟောင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏မတရားမေထုန်ပြုခြင်း၊ မစင်ကြယ်ခြင်း၊ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်း၊ မကောင်းသောတပ်မက်ခြင်း၊ အလွန်အကျွံတောင်းဆိုမှုများနှင့်ငါ့ပရိယာယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာအတွက်ရှင်ပေါလုပြသသည်။
“ကျွန်ုပ်တို့၏အဘိုးအိုသည် အပြစ်၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်းခံရမည်အကြောင်း ယခုမှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဒုစရိုက်ကို ထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုမည်အကြောင်း၊ အကြောင်းမူကား၊ သေသောသူသည် အပြစ်နှင့်လွတ်၏။” (ရောမ၊ 6,6-7) ။
ယေရှုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိဖို့ဆိုရင်အသက်ကြီးသူသေရမယ်။ ငါနှစ်ခြင်းခံတုန်းကအဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ယေရှုသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံစဉ်ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များကိုယူဆောင်ပေးခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်လူဟောင်းကိုဒီလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံစေခဲ့တယ်
“သို့မဟုတ် ယေရှုခရစ်၌ ဗတ္တိဇံကိုခံသော ငါတို့ရှိသမျှသည် သေခြင်း၌ ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ကို သင်တို့မသိကြသလော။ သို့ဖြစ်၍ ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်၏ဘုန်းတော်အားဖြင့် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နှင့်အမျှ၊ ငါတို့သည်လည်း အသစ်သောအသက်တာ၌ ကျင်လည်ရမည်အကြောင်း၊ ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သေခြင်း၌ ငါတို့ကို သူနှင့်အတူ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံရ” (ရောမ၊ 6,3-4) ။
မာတင်လူသာကဒီလူဟောင်းကို“ လူဟောင်း” လို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ ဒီလူဟောင်းသည်ရေကူးတတ်ကြောင်းသူသိသည်။ ငါကလူကြီးဘဝကိုအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးပေးတယ်။ ငါနှင့်အတူငါ့ခြေကိုညစ်ပတ်။ ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုငါထပ်ခါထပ်ခါဆေးကြောဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ ဘုရားသခင့်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ယေရှု၏အသွေးတော်နှင့်ဆေးကြောသန့်စင်ခံရသည်
ပေါလုသည်ထိုဆက်ဆံရေးကိုပညတ်တရားနှင့်အိမ်ထောင်ရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ငါကယေရှုအစားလေဝိသားဥပဒေကိုလက်ထပ်တာမှားတယ်။ ငါသည်ဤပညတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်တရား၏အောင်မြင်ခြင်းကိုရှာခြင်း။ ပညတ္တိကျမ်းကောင်းတစ် ဦး, ကိုယ်ကျင့်တရားဖြောင့်မတ်မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါယေရှုအတွက်ပညတ်တရားကိုမှားယွင်းစွာစီရင်ခဲ့သည်။ ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေကငါ့ကိုဘယ်တော့မှမထိခိုက်စေဘူး၊ သူ၏ပြောဆိုချက်များ၌ကျွန်ုပ်၌အပြစ်အနာအဆာမရှိပါ။ ပညတ္တိကျမ်းသည်တရားသောအမှု၊ သို့သော်ဥပဒေသည်အလွန်တောင်းဆိုမှုများရှိသောခင်ပွန်းဖြစ်သည်။ သူသည်နေရာတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်ထံမှစုံလင်ခြင်းကိုမျှော်လင့်သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုအိမ်ကိုသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထားစေချင်တယ်။ စာအုပ်များ၊ အဝတ်အစားများနှင့်ဖိနပ်များအားလုံးသည်နေရာမှန်၌ရှိရမည်။ အစားအစာကိုအချိန်မီperfectlyုံပြင်ဆင်ရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုကူညီရန်လက်ညှိုးကိုမတင်ပါ။ သူကငါ့ကိုမီးဖိုချောင်မှာဘယ်နေရာမှာမှမကူညီဘူး။ ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကြောင့်ဥပဒေနှင့်ဤဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ချင်တယ်။ သို့သော်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။
“အကြောင်းမူကား၊ မိန်းမသည် ခင်ပွန်းသည် အသက်ရှည်သမျှ ကာလပတ်လုံး ပညတ်တရားအားဖြင့် ချည်နှောင်ခြင်းကို ခံရ၏။ ယောက်ျားသေလျှင်မူကား၊ ယောက်ျားနှင့် ချည်နှောင်သော တရားနှင့်လွတ်၏။ ခင်ပွန်းအသက်ရှင်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး အခြားယောက်ျားနှင့် အတူရှိလျှင် မယားမဖောက်မပြန်ဟု ခေါ်ခြင်း ခံရ၏။ လင်သေလျှင်မူကား၊ အခြားသောခင်ပွန်းနှင့်ယူလျှင်၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သည်လည်း ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် အသေခံခြင်းကို ခံကြရသည်ဖြစ်၍၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်အတွက် အသီးအနှံကို သီးစေခြင်းငှာ၊ သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူသောသူ၏ လက်မှတပါး အခြားသောအပိုင်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ 7,2-4) ။
သူသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံသောအခါကျွန်ုပ်ကို“ ခရစ်တော်၌” ထားခြင်းကြောင့်သူနှင့်အတူကျွန်ုပ်သေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဥပဒေကကျွန်ုပ်အား၎င်း၏တရားဝင်အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးသည်။ ယေရှုသည်ထိုတရားတော်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင့်စိတ်တော်ကိုရှေ့ ဦး စွာမှ စ၍ သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုကရုဏာပြုနိုင်ရန်သူနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုခရစ်တော်နှင့်ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ အောက်ပါမှတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်ပြောခွင့်ပြုပါ - ယေရှုသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံတော်မူသောအခါသင်လည်းသူနှင့်အတူသေဆုံးခဲ့သလော။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သူနှင့်အတူသေကြသော်လည်း၊ ထိုမျှမကသေး။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီ၌ယေရှုနေထိုင်လိုသည်။
“အ​ကြောင်း​မူ​ကား၊ ငါ​သည်​ဘု​ရား​သ​ခင်​ထံ​တော်​၌​အ​သက်​ရှင်​မည်​အ​ကြောင်း​မူ​ကား၊ ပ​ညတ်​တ​ရား​အား​ဖြင့်​ငါ​သေ​၏။ ငါသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားသည်။ ငါအသက်ရှင်သော်လည်း ယခုငါမဟုတ်၊ ခရစ်တော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူ၏။ ယခု ငါသည် ဇာတိပကတိ၌ အသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍၊ ငါ့ကိုချစ်၍ ငါ့အတွက် ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်း၌ အသက်ရှင်သည်" (ဂလာတိ၊ 2,19-20) ။
သခင်ယေရှုက “မိမိအဆွေခင်ပွန်းအတွက် မိမိအသက်ကိုစွန့်၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာထက် သာ၍မြတ်သောမေတ္တာမရှိပါ” (ယော ၁5,13) » ။ ဤစကားများသည် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် သက်ဆိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်သိပါသည်။ မင်းနဲ့ငါအတွက် သူ့အသက်ကို စတေးခဲ့တယ်။ သခင်ယေရှုအတွက် ကျွန်ုပ်၏အသက်ကို စွန့်သောအခါ၊ ထိုအရာသည် ကိုယ်တော်အတွက် ကျွန်ုပ်ဖော်ပြနိုင်သော အကြီးမားဆုံးသောမေတ္တာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အသက်ကို သခင်ယေရှုအား ခြွင်းချက်မရှိ ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်၏ပူဇော်သက္ကာတွင် ကျွန်ုပ်ပါဝင်ပါသည်။
“ချစ်လှစွာသော ညီအစ်ကိုတို့၊ ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်၍ သန့်ရှင်း၍ နှစ်သက်ဘွယ်သော ပူဇော်သက္ကာအဖြစ် သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာကို ပူဇော်ခြင်းငှါ ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော်အားဖြင့် ယခု ငါ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဝတ်ပြုရေးဖြစ်ပါစေ” (ရောမ ၁2,1).
စစ်မှန်သော penance လုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ
“ထိုကြောင့်၊ အကြင်သူသည် ခရစ်တော်၌ရှိလျှင်၊ ထိုသူသည် အသစ်သော သတ္တဝါဖြစ်၏။ ဟောင်းသွားပြီ၊ အသစ်ဖြစ်လာတယ်”(2. ကောရိန္သု 5,17).
အရေးကြီးသောအချက်မှာ - "ယေရှုခရစ်၌အသက်တာသစ်"
ဂလာတိမှာငါတို့ဖတ်: ခရစ်တော်သည်ငါ၌တည်တော်မူ၏။. ခရစ်တော်၌ သင်၏အသက်တာသစ်သည် အဘယ်နည်း။ သင့်အတွက် အဘယ်စံနှုန်းကို ယေရှုချမှတ်ခဲ့သနည်း။ သင်၏အိမ် (စိတ်နှလုံး) ကို ညစ်ညူးအောင် ထားရန် ခွင့်ပြုတော်မူပါသလား။ မဟုတ်ဘူး! ယေရှုက ပညတ်တရားထက် အများကြီး ပိုတောင်းတယ်။ ယေရှုဤသို့ဆိုသည်–
“အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းမပြုရ” ဟူသော စကားကို သင်တို့ကြားရပြီ။ “ငါဆိုသည်ကား၊ မိန်းမကို တပ်မက်ခြင်းငှာ ကြည့်ရှုသောသူသည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ မိန်းမနှင့် ဖောက်ပြန်ပြီ” (မဿဲ၊ 5,27-28) ။
သခင်ယေရှုနှင့်ပညတ်တရားသည်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ ပညတ္တိကျမ်းကအများကြီးမေးခဲ့ပေမဲ့အဲဒါကသင့်ကိုဘာအကူအညီမှမပေးခဲ့ဘူး။ ယေရှု၏တောင်းဆိုချက်သည်ပညတ်တရား၏တောင်းဆိုချက်ထက်များစွာမြင့်မားသည်။ ဒါပေမယ့်သူကမင်းရဲ့အကူအညီနဲ့မင်းရဲ့အကူအညီကိုရောက်လာတယ်။ သူက“ အရာအားလုံးကိုအတူတူလုပ်ကြစို့။ အိမ်ကိုအတူတကွသန့်ရှင်းရေး၊ အဝတ်အစားနှင့်ဖိနပ်များကိုမှန်ကန်သောနေရာတွင်အတူတူထားပါ။ » ယေရှုသည်မိမိအတွက်မဟုတ်ဘဲသင်၏အသက်တာတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင့်အတွက်အသက်မရှင်တော့ဘဲသူ၏ဘ ၀ တွင်ပါ ၀ င်သင့်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ သငျသညျယရှေု၏လုပျငနျးတွင်ပါဝင်ရန်။
ဒါကြောင့်သူဟာလူတိုင်းအတွက်၊ အသက်ရှင်သူတွေနဲ့အတူသေဆုံးခဲ့တာပါ ယခု မှစ၍ သင်မနေရအသေခံ၍ သူ့အတွက် ထမြောက်သောသူအတွက်မူကား၊2. ကောရိန္သု 5,15).
ခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းဆိုသည်မှာသခင်ယေရှုနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သင်၏ဘဝအခြေအနေအားလုံး၌ယေရှုပါဝင်လိုသည်။ စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်း၊ စစ်မှန်သောမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သူ၌အမြစ်တွယ်သည်။ သူတို့၏အခြေခံအုတ်မြစ်မှာခရစ်တော်တစ်ပါးတည်းသာဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ယေရှုကသင့်ကိုချစ်တယ်။ ငါသူတို့ကိုမေးတယ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမင်းအတွက်ယေရှုဘယ်သူလဲ။
သခင်ယေရှုသည်သင်၏နှလုံးသားကိုဖြည့ ်၍ သင်၏ဗဟိုဖြစ်လိုသည်။ သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုယေရှုအားလုံးလုံးလျားလျားပေးနိုင်ပြီးသူအပေါ်မှီခိုအား ထား၍ အသက်ရှင်နိုင်သည်။ မင်းဘယ်တော့မှစိတ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ယေရှုသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ သူကမင်းကိုပေးနေတာလေ။
“ငါတို့သခင်နှင့် ကယ်တင်သောသခင်ယေရှုခရစ်ကို ကျေးဇူးတော်နှင့် သိကျွမ်းခြင်း၌ တိုးပွားကြလော့။” (2. ဓာတ်ဆီ 3,18).
ငါနားလည်မှုမှတဆင့်ကျေးဇူးတော်နှင့်အသိပညာအတွက်ကြီးထွားလာသည် «ငါသည်ယေရှုခရစ်၌အဘယ်သူရှိသနည်း။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏အပြုအမူ၊ သဘောထားနှင့်လုပ်သမျှအားလုံးကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ၎င်းသည်စစ်မှန်သောဉာဏ်ပညာနှင့်အသိပညာဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းသည်ကျေးဇူးတော်၊ မခံစားထိုက်သောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည် "US IN CHRIST" ကိုပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေရန်ဖြစ်သည်။ ရင့်ကျက်ခြင်းဟူသည်ဤ“ ခရစ်တော်၌ရှိခြင်း” ၌အစဉ်အမြဲပြည့်ဝသောသဟဇာတဖြစ်ခြင်း၌နေထိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နောင်တယူပြီး the ၀ ံဂေလိတရားကိုယုံကြည်သည်။ ဤအရာသည်ခရစ်တော်နှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝသစ်၏အစဖြစ်သည်။ သင်နှင့်ငါသည်ခရစ်တော်၌အသက်ရှင်သည်။ ဒါကသတင်းကောင်းပါပဲ ဒီယုံကြည်ချက်ကအားပေးမှုရောစိန်ခေါ်မှုပါ။ သူတကယ်ပျော်တယ်။ ထိုယုံကြည်ချက်သည်အသက်ရှင်သည်။
ဤကမ္ဘာ၏မျှော်လင့်ချက်မဲ့မှုကိုကြည့်ပါ။ သေခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်နှင့်ဒုက္ခ။ ဘုရားသခင်က“ ဘုရားသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုအကောင်းအားဖြင့်အနိုင်ယူ။ ၊
သင်၏လူသားချင်းများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုသင်ကြုံတွေ့ရပြီး၎င်းတို့အတွက်ဖြေရှင်းနည်းမရှိကြောင်းသင်သတိပြုမိသည်။ သင်သူတို့ကိုသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်မှာသူတို့ကိုယေရှုနှင့်ရင်းနှီးသောရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးသို့လမ်းပြရန်ဖြစ်သည်။ သူတစ်ယောက်တည်းကသာအောင်မြင်မှု၊ သူတစ် ဦး တည်းသာနောင်တရခြင်း၏အံ့ဖွယ်အမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
နေ့တိုင်းဘုရားသခင်၏လက်တော်၌ထားတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့လက်ထဲမှာသင်လုံခြုံနေတယ်။ သူသည်အခြေအနေတိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်သင့်အားဥာဏ်ပညာပေးသည်။
သူတို့ကအကြောင်းပြချက်မရှိ, belittled တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်စွပ်စွဲနေကြသည်။ သို့သော်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းက "ငါသည်ယေရှုခရစ်၌ရှိ၏" ဟုဆိုသည်။ ကျွန်တော့်ဘဝဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာသူသိတယ်။ မင်းသူ့ကိုလုံးဝယုံကြည်တယ်
“ယုံကြည်ခြင်းသည် မျှော်လင့်သောအရာကို ခိုင်ခံ့မြဲမြံစွာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပြီး မမြင်နိုင်သောအရာကို ယုံမှားသံသယမရှိသူဖြစ်သည်။” (ဟေဗြဲ၊ 11,1)!
ငါ့အတွက်၊ အောက်ပါအချက်သည်အရေးကြီးသည် -
ယေရှုခရစ်သည်ကျွန်ုပ်၌ ၁၀၀ ရာနှုန်းပြည့်အသက်ရှင်သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည်။
ပါပလော Nauer ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်